ITIL: Fifandirana eo amin'ny fitantanana sy ny fitantanana olana
ITIL: Fiainana eo amin'ny fitantanana tsy miankina sy ny fitantanana ny olana
Ahoana ny fahasamihafan'ny ITIL ny olana sy ny loza
Inona no zava-mitranga ao amin'ny ITIL?
Inona ny olana ao amin'ny ITIL?
Inona no ifandraisan'ny fifindrana sy ny olana amin'ny ITIL?
Nahoana ny ITIL no miavaka eo anelanelan'ny loza sy ny olana?
Fampiofanana sy fanamarinana ny ITIL
AhoanaITIL dia manavaka ireo olana sy tranga
Ny fanabeazana ao amin'ny kilasin'ny ITIL® Foundation dia mihevitra matetika fa ny fitsirihana azy dia misaraka amin'ny fisehoan-javatra sy ny olana. Mba hamahana ity olana ity sy hanolorana fanazavana, ity bilaogy ity dia hanavaka ny fifanoherana eo amin'ny fisehoan-javatra sy ny olana, ny fomba fifandraisany, ary ny antony maha-samy hafa azy.
Araka izay asehon'ny ITIL, fizarana iray dia fampidirana tampoka amin'ny serivisy na fanimbana ny toetoetry ny asa. Izay matetika no manapa-kevitra ny filaharan'ny zavatra iray amin'ny fisehoan-javatra dia tsy misy dikany raha toa ka tapaka ny fifanarahana momba ny serivisy (SLA). Tahaka izany, ny ITIL dia mandinika ny fisehoan-javatra na dia efa tapaka ny SLA aza mba hanondroana ny fitazonana na ny fiantraikany amin'ny fiantraikany.
Amin'ny teny hebreo, ny fizarazarana dia ny sarin'ny fihoaram-pefy.
Araka ny voalaza amin'ny ITIL, olana iray no loharano fototry ny fara fahakeliny andiany iray. Ny olana dia azo raisina amin'ny fahazoana zavatra iray farafahakeliny, na izy ireo dia afaka atsangana raha tsy misy ny fampisehoana fizarana.
Amin'ny teny hoe layman, ny olana dia ny fanehoana ny antony na mety ho antony na farafaharatsiny iray.
Raha ny fitsipika, ny fifandraisana misy eo amin'ny roa dia ny olana iray no antony iray farafaharatsiny. Na ahoana na ahoana, dia eritreretina fa misy fisehoan-javatra (na fanangonana episodes) izay noforonin'ny olana mihoatra ny iray.
Ny tanjon'ny fanekena ny fisehoan-javatra sy ny olana dia mitovy amin'ny fisorohana ny toe-javatra sy ny vokatra farany. Ny olana dia ny antony, ary ny episy dia ny fiantraikany.
Ny ITIL dia mandrisika ny fikambanana mba hamantatra ireo zavatra ireo amin'ny fahazoana ny fahatsapan'ny roa azy ireo matetika sy amin'ny fomba tsy ampoizina. Ny fiheverana ny fizotran'ny tantara iray dia midika fa na inona na inona ny fiasa dia voatery naverina tamin'ny laoniny. Tsy midika izany fa tsy hiverina na ho ela na ho haingana ilay fisehoan-javatra. Rehefa miteny aho hoe "miharihary," tsarovy fa mety midika hoe fotoana iray na 10 taona. Ny zava-misy dia ny hoe ny fanapahan-kevitra amin'ny fizarana iray dia tsy miovaova.
Ny olana, na ahoana na ahoana, dia ny anton'ny fisehoan-javatra. Azontsika ampiasaina ny fomba fiasa manokana hanavaka ny loharanon'ny olana iray ary hamaha izany olana izany amin'ny farany. Amin'ny toe-javatra misy rehefa misy ny fanapahan-kevitra, dia miova ny fitantanana raha jerena ny fiheverana fa ny fiheverana ny loharano fototra dia matetika miteraka loza.
Ny fitantanana mahery vaika dia miantoka fa amin'ny maha-mpamatsy tolotra anao dia afaka mitazona ny antoka nomena anao ao amin'ny SLAs ianao amin'ny fanomezana rafitra hanamafisana haingana ny serivisy rehefa fototra izany. Ny fitantanana ny olana dia miantoka fa ny mpanome tolotra dia afaka maneho fihetsika manoloana ny fisehoan-javatra amin'ny tanjona tsy hamerimberenana azy ireo sy ny fitazonana am-pilaminana tsy hitranga.
Ireo dia fomba fitsaboana samihafa satria mila fepetra sy fampiharana isan-karazany izy ireo. Ny fitantanana ny fisehoan-javatra dia mila manamboatra haingana ny serivisy mifanaraka amin'ny SLA izay napetraka na dia mila mamono ny loharanon-tsarin'ny fizarana aza ny fitantanana olana. Amin'ny toe-javatra sasany, raha adika ara-drariny ny olana, ny mpamatsy orinasa iray dia tsy maintsy manamboatra na manitatra ny fanakanana amin'izao fotoana izao.
Ny fanabeazana dia mampihatra ny fizotran'ny fitantanana ny olana sy ny paikady eo amin'ny sehatry ny asa fiandraiketany manokana amin'ny fihaonan'ny fametrahana ny Mastering Problem Management. Ity tsy fanamafisana ity, ny fivoahana amin'ny fomba fijerin'ny fikarohana dia manome ny mpianatra ny fitaovana izay takiany amin'ny fangatahana fampiharana ITIL.
Courses mifandraika amin'izany
Fepetra fampiasana ITIL
Nahoana no ilaina ny mpanazatra tetikasa PMP?